Zọ aghụghọ iji bulie ọdịnaya gị elu | Martech Zone
Na Tuesday, anyị nwere webinar mara mma na otu n'ime ndị mmekọ anyị, Wordsmith maka ahia, na Usoro Ọdịnaya Ọdịnaya 10 maka Mgbe olulu mmiri na-agba. Ọ bụ ezie na anyị nwere egwuregwu na-atọ ọchị ma na-agba obere egwu n'azụ Mpaghara, enwere ụfọdụ nghọta miri emi na-ekere na webinar.
Nke a bụ ụzọ dị iche iche dị mkpa sitere na webinar ọdịnaya anyị:
1. Wepụta oge maka usoro okike - Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka ọ dị mfe, ọtụtụ mmadụ anaghị ewepụta oge maka ọgbọ; ha wepụtara oge maka igbu ọdịnaya. Wepụta oge iji chepụta ma ọ bụ mepụta echiche ọhụrụ, ma tufuo ihe ndọpụ uche gị. Njikọ stat:
"Ná nkezi, ndị ọrụ na-eji ihe karịrị 50% nke ụbọchị ọrụ ha anata ma na-achịkwa ozi kama iji ya arụ ọrụ ha." (Isi mmalite: LexisNexis)
2. Debe akwukwo ihe di nso - Ọ bụ ezie na ọ dị mma iwepụta oge maka usoro okike, maka ụfọdụ mmadụ (dị ka m!), Ihe ọ juụ theụ ndị na-emepụta ihe anaghị akwụsị akwụsị. Enwere m ike iwepụta ezigbo echiche ma m na-ele Scandal na Netflix, ma ọ bụ mgbe m nọ n'ụlọ mgbatị ahụ. Idebe mpempe akwụkwọ dị nso ga-agba gị ume idetu echiche gị ma chekwaa ya ma emechaa.
3. Nwee gburugburu izu ụka na kwa ọnwa - Mgbe anyị bidoro ịgba ndị ahịa anyị ume ka ha mee nke a, anyị hụrụ n'ezie ọkwa njin ọchụchọ na-arịgo maka ndị ahịa rapaara na nke a n'afọ na-esote karịa ndị na-emeghị. Nke a bụ ụzọ dị mma iji mee mkpọsa ọtụtụ ọwa; ọ bụrụ na ị nwere isiokwu ole na ole ị nwere ike ilekwasị anya, mgbe ahụ ị nwere ike weghachite ọdịnaya na usoro dị iche iche, dị ka infographic, whitepaper, videos, wdg, nke mere na ọ na-eme ka ọrụ gị dịkwuo mfe. Njikọ stat:
"84% nke ndị na-ere ahịa na-ekwu na ha anaghị adị irè na ahịa ọdịnaya kwuru na ha enweghị usoro ederede." (Isi mmalite: Ụlọọrụ Marketing Content)
4. Igbe mbata gị bụ otu n'ime akụ gị kacha mma - Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ụfọdụ echiche ọhụụ maka ọdịnaya, lelee igbe nnabata email gị. You nwere onye ahịa jụrụ gị ajụjụ ndị mmadụ nwere ike ịjụ? Weghachi azịza gị maka iji ahịa ọdịnaya. Gị na onye ọrụ ibe gị enwere mkparịta ụka na-atọ ụtọ gbasara ihe ị na-eme? Na-ekwu maka ya na blog gị. Lelee nkwukọrịta gị site na email wee hụ otu ị ga - esi jiri ya na azụmaahịa ọdịnaya ụlọ ọrụ gị.
5. Mgbe ị na-enwe obi abụọ, depụta ya - Dị ka ụfọdụ oké nnyocha na Wordsmith maka Marketing ekenịmde, depụtara posts na akaụntụ maka ihe karịrị 10% nke niile na utu aha na Inbound.org “All Oge” Top 1,021 nnyefe. (Lee ihe m mere na post a?) Ndị mmadụ hụrụ nọmba n'anya, ọ na-enyekwa ndị mmadụ nkwa ka ha wee maratụ ihe ha ga-enweta mgbe ha pịrị.
6. Enweghi oge ide? Iku onye ghostinterviewer / onye edemede - Ka m kọwaa. Arụkọ m ọrụ na otu ndị isi na ndị CMO nwere nghọta dị egwu banyere ọrụ ha, mana ha enweghị oge ide. Iji merie nke a, anyị ezigala ndị ode akwụkwọ mmụọ na-ewe otu awa kwa izu iji gbaa ndị isi ụlọ ọrụ ajụjụ ọnụ, ha wee dee blọọgụ ma ọ bụ edemede site n'aka onye isi. Ọ bụ ụzọ dị mma iji chee echiche iduzi ebe ahụ ma chekwaa oge na ego.
7. Kpọsị, kwụsị ịtụ ụjọ maka ịpụ apụ - Ruo ogologo oge, ịchụpụ ọdịnaya bụ ihe esemokwu maka ọtụtụ ndị anyị kwurịtara okwu, mana anyị abụrụla onye na-akwado ịchụpụ ahịa kemgbe ụbọchị 1. Ugbu a, tupu mmadụ etie m mkpu na nkwupụta, ka m kọwaa. Ọbụlagodi na anyị wepụta nyocha ma ọ bụ ọdịnaya, anyị na-emetụ ụdị ọdịnaya ọ bụla tupu ọ gafere ndị ahịa ma ọ bụ banye n'ime ụwa. M ka na-eme atụmatụ ahụ, m ka na-eme nyocha isiokwu ahụ, m ka na-edezi olu ahụ ma m ka na-achịkwa otu ibe ọdịnaya ga-adị. Njikọ stat:
“62% nke ụlọ ọrụ outsource ha ahịa - si 7% na 2011.” (Isi mmalite: Mashable)
Iji gụọ banyere ụzọ niile, lelee webinar zuru ezu ebe a:
Ọ bụrụ na ị nwere ndụmọdụ ndị ọzọ ị ga-agbakwunye, biko mee ya na nkwupụta!
Tags: mmepụta ihecontent Marketingimepụta ọdịnayaechicheechiche maka ideihe deeWriting
Jan 31, 2015 na 10: 47 AM
Ndụmọdụ dị ukwuu nke onye ọ bụla kwesịrị ịkụnye n'ịkwadebe webinar gị.